Inqubomgomo yobumfihlo - Binary Options Izinkomba
We will collect personal identification information from Users only if they voluntarily submit such information to us (fill out a form and/or subscribing to our newsletter). Users may be asked for, as appropriate, name, email address.Users can always refuse to supply personally identification information, except that it may prevent them from engaging in certain Site related activities. Thina ngeke ubuyiselwe ulwazi lwakho lomuntu siqu isikhathi eside kunaleso yini edingekayo ukuze afeze izinjongo ngawo eqoqwe noma njengoba kudingwa imithetho esebenzayo noma iziqondiso. abasebenzisi may, Nokho, vakashela Site yethu ngokungaziwa.
Ulwazi olubona okungekhona siqu
Singakwazi ukuthi siqoqe ulwazi okungelona langasese ukuhlonza mayelana Abasebenzisi noma nini lapho uxhumana Site yethu. Ulwazi olubona okungekhona okomuntu siqu ukuhlonza kungafaka igama isiphequluli, uhlobo computer nolwazi lobuchwepheshe mayelana Abasebenzisi kusho uxhumano Site yethu, ezifana uhlelo lokusebenza kanye kobana abanikeli bomsebenzi Inthanethi ukusetshenziselwa kanye neminye imininingwane efanayo.
Imigomo yethu zingasebenzisa "amakhukhi" ukuthuthukisa isipiliyoni yomsebenzisi. isiphequluli sewebhu yomsebenzisi ubeka amakhukhi drive wabo onzima ngezinhloso irekhodi-ukugcina futhi ngezinye izikhathi ukulandelela ulwazi ngabo. Umsebenzisi bangase bakhethe ukuthi uhlele isiphequluli zabo zokusebenza ukuze wenqabela amakhukhi, noma ukukuxwayisa lapho amakhukhi athunyelwa. Uma benza kanjalo, wazi ukuthi amanye izingxenye Imigomo kungenzeka zingasebenzi kahle.
Siyisebenzisa kanjani imininingwane izinombolo
BinaryOptionsIndicators.com kungenzeka siqoqe siphinde zisebenzisa Abasebenzisi ulwazi lomuntu siqu ngezinhloso ezilandelayo:
- Ukuze uthuthukise Site yethu
Singasebenzisa impendulo oyinikezayo ukuthuthukisa imikhiqizo kanye namasevisi ethu.
- Ukuthumela imeyili wezikhathi ezithile (newsletter)
Singaphinde futhi sisebenzise ikheli le-imeyili ukuze uphendule imibuzo yabo, imibuzo, kanye / noma nezinye izicelo. Uma Umsebenzisi enquma ukungena ohlwini lwamakheli, bazoyithola ama-imeyili angabandakanya izindaba inkampani, izibuyekezo, umkhiqizo ahlobene noma ulwazi isevisi, njll. Uma nganoma yisiphi isikhathi umsebenzisi angathanda ukuzikhipha ohlwini kusukela ekutholeni ama-imeyili esizayo, thina zibandakanya ezinemininingwane imiyalelo sikukhiphe ohlwini ezansi imeyili ngamunye.
Ukwabelana ulwazi lwakho lomuntu siqu
Asithengisi, ukuhweba, noma intela Abasebenzisi Ulwazi lomuntu siqu kwabanye. Singase sabelane ulwazi ejwayelekile oluhlanganisiwe lokubala ubuningi babantu ayihlanganisiwe yiluphi ulwazi zomazisi mayelana izivakashi kanye nabasebenzisi zasemsebenzini yethu, eziphethwe othembekile nabakhangisi ngezinhloso echazwe ngenhla.
Abasebenzisi bangase bathole ukukhangisa noma okunye okuqukethwe ku Site yethu axhunywe kuleli amasayithi namasevisi lozakwethu, abahlinzeki, abakhangisi, abaxhasi, abalayisense nezinye besithathu. Asazi ukulawula okuqukethwe noma izixhumanisi evelayo kulawa masayithi futhi akuyena obangela imikhuba oqashwe amawebhusayithi exhumene noma Site yethu. Ngaphezu kwalokho, lezi amasayithi noma amasevisi, kuhlanganise okuqukethwe kwabo nezixhumanisi, kungase kube njalo siguqula. Lawa masayithi kanye amasevisi angase anezinqubomgomo zawo zobumfihlo nezinqubomgomo kwamakhasimende. Ukuphequlula kanye nokuxhumana kunoma iyiphi enye ingosi ye, kuhlanganise amawebhusayithi okuyinto isixhumanisi Site yethu, kukhonjelwe emigomeni ukuthi iwebhusayithi uqobo nezinqubomgomo.
Izikhangiso zingaveli kusayithi zethu kungenzeka zilethwe Abasebenzisi ngokukhangisa abalingani, abangase amakhukhi. Lawo makhukhi avumela i-server isikhangiso ukuba siqaphele ikhompyutha yakho njalo lapho sikuthumelele isikhangiso inthanethi ukuhlanganisa imininingwane okungezona zomazisi ngawe noma abanye abasebenzisa ikhompyutha yakho. Lolu lwazi evumela amanethiwekhi isikhangiso, phakathi kwezinye izinto, ukuletha izikhangiso ezihlosiwe ukuthi abakholelwa ukuthi iyoba nesithakazelo kakhulu kuwe. Le nqubomgomo yobumfihlo awubhekene ukusetshenziswa cookies noma yikuphi abakhangisi.
Ezinye izikhangiso kungenzeka sinikezwa yi-Google. i-Google isebenzisa ikhukhi DART iyenza izikhangiso Abasebenzisi esekelwe bevakashele Site yethu kanye namanye amasayithi ku-inthanethi. I-DART isebenzisa "ulwazi okungelona okhonjwa" futhi akuhambisani ukulandelela imininingwane ngawe, njengegama lakho, ikheli le-imeyili, ikheli lendawo, njll. Ungakhetha ukuphuma ukusetshenziswa ikhukhi DART ngokuvakashela inqubomgomo yobumfihlo ye-Google isikhangiso nakunethiwekhi okuqukethwe http://www.google.com/privacy_ads.html
Izinguquko kwale nqubomgomo yemfihlo
BinaryOptionsIndicators.com has ngokubona ukuvuselela kwale nqubomgomo yemfihlo nganoma isiphi isikhathi. Lapho senza, sizobe ubukeza usuku olusha ezansi leli khasi. Sikhuthaza Abasebenzisi njalo ukuhlola leli khasi noma yiziphi izinguquko ukuze uhlale unolwazi indlela esisisebenzisa ngayo ukusiza ukuvikela ulwazi lomuntu siqu siqoqa. Wena avume futhi uyavuma ukuthi kuyisibopho sakho sokubuyekeza kwale nqubomgomo yemfihlo ngezikhathi futhi esazi ukulungiswa.
Ukwamukela kwakho migomo
Ngokusebenzisa le site, ucacisa ukwamukela kwakho le nqubomgomo. Uma ungavumelani le nqubomgomo, sicela ungawasebenzisi Site yethu. Ukuqhubeka kwakho usebenzisa i-Site elandelayo zokuthunyelwa izinguquko kule nqubomgomo kuyothathwa ukwamukela kwakho lezo zinguquko.
Uma unemibuzo mayelana nale nqubomgomo yobumfihlo, sicela uxhumane nathi.